Ampianaro Mivavaka Izahay | Manatòna An’​Andriamanitra
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aymara Boligara Catalan Cebuano Chichewa Cinghalais Danoà Efik Espaniola Estonianina Failandey Frantsay Ga Grika Guarani Géorgien Hiligaynon Holandey Hongroà Ibo Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Italianina Japoney Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Haïti Kroaty Letonianina Lingala Litoanianina Luo Malagasy Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Myama Ngabere Norvezianina Nzema Poloney Portogey Quechua (Bolivia) Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Tagalog Tahisianina Tailandey Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Uruund Vietnamianina Xhosa Yorobà Zoloa Éwé
“Mangataha Foana dia Homena Ianareo”
Nisy mpianatr’i Jesosy nangataka hoe: “Tompo ô, mba ampianaro mivavaka izahay.” (Lioka 11:1) Nanao fanoharana roa àry i Jesosy, mba hampianarana antsika hivavaka. Natorony koa izay tokony hatao mba hohenoin’Andriamanitra ny vavaka ataontsika. Hahaliana anao izany raha efa nieritreritra ianao hoe mba mihaino ny vavaka ataonao ve Andriamanitra.—Vakio ny Lioka 11:5-13.
Misy zavatra azontsika tahafina ao amin’ilay fanoharana voalohany, rehefa mivavaka isika. (Lioka 11:5-8) Nanana vahiny, hono, ny lehilahy iray tamin’ny alina be, nefa tsy nanana sakafo haroso azy. Nila nitady hevitra haingana àry izy, ka nandeha nisambotra mofo tany amin’ny namany, na dia efa alina be aza. Tsy nety nifoha ilay namany tamin’ny voalohany, satria efa natory be niaraka taminy ny vady aman-janany. Tsy menatra mihitsy anefa ilay lehilahy nanam-bahiny fa mbola nangataka foana. Nifoha ihany àry ilay namany nony farany mba hanome mofo azy. *
Inona no ianarantsika avy amin’izany? Nilaza i Jesosy fa tokony tsy hitsahatra hivavaka isika, izany hoe hangataka sy hitady ary handondòna foana. (Lioka 11:9, 10) Te hilaza ve i Jesosy fa toy ny mandondòna eo am-baravaran’olona tsy te hamoha antsika isika rehefa mivavaka? Tsy izany mihitsy! Te hilaza kosa izy hoe tsy mitovy amin’ny naman’ilay lehilahy nanam-bahiny Andriamanitra. Vonona hanome izay angatahin’ny olona mino azy izy raha mifanaraka amin’ny sitrapony ilay izy. Hita hoe manam-pinoana isika raha tsy mitsahatra mangataka. Hita amin’izany koa fa tena mila an’ilay zavatra angatahantsika isika sady mino fa afaka hanome an’ilay izy Andriamanitra.—Marka 11:24; 1 Jaona 5:14.
Ahalalantsika ny toetran’i Jehovah, ilay “Mpihaino vavaka”, kosa ilay fanoharana faharoa. (Salamo 65:2) Hoy i Jesosy: “Ray iza eo aminareo moa no angatahan-janany trondro, kanefa hanolotra azy bibilava fa tsy trondro? Na angatahan-janany atody ka hanolotra azy maingoka?” Mazava ho azy fa tsy hisy mihitsy ray tia zanaka hanome zavatra mampidi-doza an-janany. Nilaza i Jesosy avy eo hoe olona mpanota aza mahalala ‘manome zava-tsoa’ an-janany, “mainka fa ilay Ray any an-danitra! * Hanome ny fanahy masina ho an’izay mangataka aminy tokoa izy!” Io mantsy no fanomezana tsara indrindra azony omena!—Lioka 11:11-13; Matio 7:11.
Vonona hanome izay angatahin’ny olona mino azy Andriamanitra raha mifanaraka amin’ny sitrapony ilay izy
Inona no ianarantsika avy amin’izany, momba an’i Jehovah ilay “Mpihaino vavaka”? Te hilaza i Jesosy fa toy ny Ray be fitiavana vonona hanome izay ilain’ny zanany i Jehovah. Tsy tokony hisalasala àry ny mpanompony hangataka izay irin’ny fony. Fantatr’izy ireo anefa fa tsy mitady afa-tsy izay hahasoa azy ireo i Jehovah. Eken’izy ireo àry izay valim-bavaka omen’i Jehovah, na dia tsy araka ny noeritreretiny aza izany. *
Famakiana Baiboly amin’ny Aprily
^ feh. 4 Niresaka ny fanaon’ny Jiosy tamin’izany i Jesosy tamin’io. Noheverin’izy ireo ho adidy mantsy ny nampiantrano vahiny. Mofo ampy tontolon’ny andro ihany no namboarin’ny fianakaviana tsirairay, ka matetika no nindrana mofo tany aman’olona ry zareo rehefa lany izany. Nahantra koa ny fianakaviana sasany ka nanao ladina an-tany tao amin’ny efitra iray ihany rehefa natory.
^ feh. 6 Nampiasa an’ilay teny hoe “mainka fa” i Jesosy mba hanamafisana fa tsara toetra lavitra noho ny olona Andriamanitra.
^ feh. 7 Manazava bebe kokoa momba ny vavaka ny toko 17 amin’ny boky Inona Marina no Ampianarin’ny Baiboly?, navoakan’ny Vavolombelon’i Jehovah.
Aprily 2013 | Te Hanana Fiainana Mahafa-po ve Ianao?
NY TILIKAMBO FIAMBENANA Aprily 2013 | Te Hanana Fiainana Mahafa-po ve Ianao?